Fahavaratra - Wikipedia
Ny fahavaratra dia fizaran-taona mifanandrify amin'ny vanim-potoana filatsahan'ny orana sy famokarana vokatra sy fambolena. Fizaran-taona faharoa izy amin'ireo faritra misy fizaran-taona efatra, ka ny lohataona no eo alohany fa ny fararano no mandimby azy. Lava kokoa noho ny alina ny andro. Mafanafana sady be orana kokoa ny fahavaratra raha mitaha amin'ny fizaran-taona hafa.
Manomboka ny Oktobra ka hatramin'ny Martsa (enim-bolana) ny fahavaratra amin'ny faritra be orana.
Ny teny hoe fahavaratra dia heverina ho avy amin'ny teny hoe varatra noho ny fisian'ny varatra matetika amin'io vanim-potoana io. Amin'ny fahavaratra koa no betsaka rivodoza.
Ny fahavaratra kosa raha manaraka ny fizaran-taona efatra ho an'ireo firenena amin'ny tapany avaratry ny bolantany dia ny fotoana mampafana sy mahamaina ny andro, manomboka ny 21 jiona ka hatramin'ny 21 septambra.
Raha zaraina efatra mitovy ny taona iray dia izao: ao amin'ny ila-bolantany avaratra dia mahafaoka ny volana Jona sy Jolay ary Aogositra ny fahavaratra fa ao amin'ny ila-bolantany atsimo kosa dia manambatra ny volana Desambra sy Janoary ary Febroary.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahavaratra&oldid=1041381"
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2021 amin'ny 15:27 ity pejy ity.